Izeluleko eziyi-10 ze-SEO Copywriting ezikulezi | Martech Zone
NgoMsombuluko, Disemba 23, 2013 NgoMsombuluko, Disemba 23, 2013 Douglas Karr
Ngesonto eledlule sihlangane nababhali abangaba ngu-30 kwelinye lamakhasimende ethu futhi saxoxa ngokuthi ababhali babo bokuqukethwe bangazisebenzisa kanjani kangcono izinjini zokusesha lapho bebhala izindatshana zabo. Izincomo zethu bezihambisana nale infographic kusuka OkuqukethweVerve.
Izindatshana lezi ezazibhalwa ngabantu zazivele zingakholeki - ngakho-ke sagxila ezindaweni ezimbili ezibalulekile zokwenza ngcono.
Develop iziqu ezimangalisayo lezo zithinta imizwa yokufunda futhi zivimbele ilukuluku labo ngokwanele ukuchofoza kuzo.
Qinisekisa ukuthi ababhali bazakhele ngokuzimela amafayela wabo we- ukwethembeka negunya, ukuthuthukisa okuqukethwe kwabo nokushayela phambili igunya eliphelele lomkhiqizo.
Njengoba ngike ngasho ngaphambili - i-SEO iyinkinga yomuntu, ayiseyona inkinga yezibalo. Ukubhala okuhle kakhulu kumayelana nokudonsa ukunaka kwezithameli zakho. Uma wenza lokho, izinjini zokusesha zizolandela!
Tags: ukukopishaukusebenzisa ngokugcwele injiniukubhala umbhalo
Izipoki Zokumaketha Esidlule, Esamanje Nekusasa
Dec 28, 2013 ngo-2: 32 PM
Siyabonga ngokuthunyelwe okuthakazelisayo - ngicabanga ukuthi uqinisile, i-Google ayilinganisi izinto ngendlela eyayivame ukwenza ngayo.
I-algorithm icace bha kulezi zinsuku - ngokuqinisekile ikhetha okuqukethwe okubukeka ngokwemvelo.
Ngicabanga ukuthi i-SEO izohlala ibalulekile (ngebhizinisi) kuze kube yilapho i-Google ikhanda amakhompyutha empeleni ane-AI futhi angacabanga - lapho-ke sesiphelelwe ngumsebenzi!
I-Google + nayo ibaluleke kakhulu - ukubhala yonke indlela.
Ngo-Apr 2, i-2014 ku-12: 26 AM
Hhayi-ke, wonke amathiphu owabelane ngawo muhle futhi ayasebenza ngempela. Benginombono ngakho njengombhali wami wezempilo wemvelo-uMichael Jones enza amakhophi we-SEO ngokufanele. Ukuqasha Umbhali Wakho Wombhali kwakuyisinqumo esihle, njengoba ngithola zombili izinsizakalo zokubhala nokubhala ngaphansi kophahla olulodwa. Izinkokhelo zinengqondo futhi ulwazi lubanzi.